Skateboard Electric Engenza Riders Flying - Jomo Technology Co., Ltd
Skateboard Electric Engenza Riders Flying
Lapho onobuhle eyinhloko ibonakale itholakala emakethe, babethunjiwe kwamukwa nabo kuphela okufanele isetshenziswe njengoba ezokuthutha bomdabu, ukuzidela okukhulu uma wayefuna ukuya kamngane, uya esikoleni esiphakeme, noma enye beya. Lokhu esheshayo skateboard kagesi iza ezingemuva disc ukubopha, omkhulu amathayi emgwaqweni womoya kanye lusekelwa ngamandla brushless Hub Motor 350W * 2 futhi 20pcs18650 izinga High lithium amaseli Surf edolobheni lakho nale phakathi ongaphakeme gravity design! Nakuba uyoba ngobuchwepheshe nokukwazi eguqulayo amabhethri, akuyona isethaphu ashisayo swappable, ngakho uzowathola ngokoqobo unscrewing iphakethe ukubeka ngendlela entsha. Ngokuya amandla, kubukeka sengathi kungenzeka kahle ukupakisha sasivumela Punch njengoba ikwazi ukufeza ngesivinini phezulu 26mph. Kwenza ukusetshenziswa Manta Drayivu kokuxazulula okuyinto akasebenzisi Ukuzilungiselela noma amabhande. It yakhelwe ukusetshenziswa zonke izinhlobo zokusebenzisa, ngokuba ophakeme abafuna amadlingozi ukuthi kudingeka sifinyelele ngesivinini ngokweqile ku zokusebenzisa yimikhuba.
Ngu indlela yokuya esheshayo flying akhuphuke emagqumeni, kokuba okusezingeni eliphezulu unobuningi uyahlanya we voltage zomshini omkhulu ngeke sonke isikhathi sinqobe, Nokho ufuna skateboard yakho ukubheka nesipiliyoni sengathi enye njengoba ngempumelelo. Nokho uma ungathanda i skateboard kagesi ukuthi incane, oluncane, futhi izindleko elithe ongaphakeme, lo Roto-band (KOOWHEEL brand) skateboard kagesi yisinqumo sakho kangcono manje. I Roto-band skateboard esitolo inthanethi ukukunikeza uchungechunge hoverboard kagesi , kuhlanganise nokuzilimaza ezimbili isondo ngokulingene isikuta , alo isikuta kagesi kanye ezishisayo amasondo amane longboard kagesi . Manje njengoba sinezinto zonke ingxenye ezethula endleleni, siyaphi hlola izinga okusezingeni eliphezulu kanye nokusebenza kakhulu skateboard kagesi itholakala phandle lapho, futhi ubone intengo bona nokudayisa ku Roto-band yezitolo.
Eziningi zalezi entsha hoverboard kagesi zilawulwa kude, i-bluetooth elikude, okungenza kukusiza sisheshe khona noma ukubopha nge thumbwheel enembile, futhi kuye LED izinkomba yokukubonisa indlela ijusi okuningi okungenzeka ukuthi uke washiya e skateboard yakho kagesi. Esinye sezici eziningi ebanda kunazo zonke Roto-band ( Koowheel ) wukuthi uhlelo lwayo lokusebenza ivumela nabagibeli esikhundleni firmware ebhodini kwentambo ngendlela ye-Bluetooth. Yiqiniso, lokhu kwaba khetho ongahluziwe kakhulu ukukala ukusebenza akusho lizinga ebhodini kanye ongakhetha zebhodi awazange kubhekwe.
isikhathi Iposi: Mar-15-2018